एक वर्षअघि वीरगन्ज चिनी मिलनजिक डोमबस्तीमा क्यामरा बोकेर छिर्दा निलो आँखा भएकी एक बालिकाले ध्यान खिचिन्। झुपडबस्तीमा अभावमा बाँचेकी ८ वर्षीया काजल मली विछट्टै राम्री थिइन्। गलामा पोते, निधारमा टिका, ओठमा मिठो मुस्कानसहित सुनौलो केशमा सजिएकी उनी तस्बिरमा झनै आकर्षक देखिइन्। वर्ष दिनभरि उनको तस्बिर मेरो मनमा गढिरह्यो।
त्यही बस्तीमा मंगलबार पुग्दा मैले उनलाई ठम्याउन सकिनँ। आँगनमा खेल्दै गरेका केटाकेटीको भिडमा मैल्ये उनलाई निक्कै खोजेँ तर भेटिइनन्।
क्यामराको लेन्सले तिनै साना नानीको तस्बिर लिन खोज्दा एउटा चिनेको मुस्कान लेन्सले कैद गर्‍यो। उनको गलामा पोते थिएन। टाउको मुडुलो, कान बुच्चो थियो। उनको मुस्कान भने एक वर्षअघिजस्तै निश्चल भेट्टाएँ।
यो झुपडबस्तीमा काजल दुई दाजु र आमाबासँग बस्छन्। उनी र उनका दाजु कोही विद्यालय गएका छैनन्। सरकारी शिक्षा निशुल्क भए पनि अन्य खर्च नहुँदा बस्तीका अन्य बालबालिका पनि विद्यालय जाँदैनन्। उनकी आमा बाँसका सामग्री बनाउँछिन् भने बुबा नगरपालिकामा कुचीकार छन्। काजलका निला आँखा गाउँमा सबैले मन पराउँछन्। अरु बस्तीका मान्छे आएर पनि उनको आँखाबारे सोध्ने गरेको आमा सुशीलाले बताइन्।
उनीहरूजस्तै दर्जन परिवार यो बस्तीमा बस्छन्। घरवरिपरि फोहेार छ। पानीको अभाव छ। सँधै नुहाउन नसक्दा काजलको टाउकोमा खटिरा आएपछि कपाल काटिदिएको उनकी आमाले बताइन्। 'पहिला त काजलले कपाल काट्नै मानेकी थिइन, बल्ल मानी,' आमाले भनिन्।
गाउँमा वैवाहिक समारोह हुँदा उनीहरू नयाँ लुगा र सुन्दरताका अन्य सामग्री लगाउन पाउँछन्। पहिलो तस्बिर त्यस्तै एउटा अवसरको हो। अहिले त उनको माला हराइसक्यो। टिका पनि छैन। फेरि कसैको बिहे भए उनले श्रृंगारका सामान पाउँछिन्। उनीहरूको समुदायमा सानैमा बिहे हुने चलन छ।
April 19, 2012 Posted by उपेन्द्र लामिछाने | Untagged
समाचार निकै उत्कृष्ट छ ।
great ............., this is the real journalism..............that help to change society..........unlike Anuja Bania's fake story in headline of reputed national daily.......
news dherai ramro cha nai but kajol is so beautiful....n her eyez also....n lamichane G ko fotography pani.......
Very heart touching real story of life, but who is ready to help for her study? its not enough just read news and ch ch ch ch bichara ........ .
Dip Bahadur Singh
आज पढियो अब काजल स्कूल जाने भइन रे, दानिले सहयोय गरेरे । यो नै धर्म हो । फजुल खर्च गर्नुको साटो कैंयौं काजलहरूलाइ सहयोग गरौं ।
Thanks Mitra Upendra! This is called Journalism, which touches real part of need & reality. Good Luck
This is Reality and is heart touching too,, .......May god help her............ Where are the organisation gone who call self as developmental NGOs,, This is the real face of Nepal................
news ramro 6
KAJAL LAI AAISHWORYA RAI BANAUNU PARCHHA.......